Lee Kwang Soo ရဲ့ချစ်ချစ် မင်းသမီး Lee Sun Bin ဟာဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲ? | Asia News Bar
Lee Kwang Soo ရဲ့ချစ်ချစ် မင်းသမီး Lee Sun Bin ဟာဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးလဲ?
Lee Kwang Soo နှင့် မင်းသမီး Lee Sun Bin တို့ဟာ သူတို့နှစ်ဦး ချစ်သူဖြစ်နေကြပြီဆိုတာကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ ပရိတ်သတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်တည်းကစပြီး သူတို့နှစ်ဦးလုံးကို ပရိတ်သတ်တွေက သဘောတူကြပြီး အားပေးခဲ့ကြတာ ယနေ့အထိတိုင်ပါပဲ။ အချို့ပရိတ်သတ်တွေလည်း Lee Sun Bin နှင့်ပက်သက်ပြီး သိကောင်းသိနိုင်ပါတယ်။
မသိသေးလို့ သူမနှင့် ပက်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အခု Article ကအထောက်အကူ ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Lee Sun Bin ကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ7ရက်နေ့၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ Cheonam မြို့၊ တောင်ကိုရီးယားမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အပြင်မော်ဒယ်၊ အဆိုတော်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။
တူရိယာပိုင်းနှင့် ပက်သက်ရင်လည်း Piano, Keyboard, Guitar စတာတွေကိုပါ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တီးခတ်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှာတော့ JQT ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး Idol အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါအဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာပဲ ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။
Lee Sun Bin ဟာ Running Man ကို ၂ကြိမ်တိုင်တိုင် ဧည့်သည်အဖြစ်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထိုအချိန်တုန်းကတည်းက Lee Sun Bin ဟာ Kawng Soo အပေါ်သဘောကျနေဟန်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ Ideal type ကဘယ်သူလဲလို့ မေးမြန်းရာတွင်လည်း Lee Kwang Soo လို့သာဖြေခဲ့သူပါ။ အခုချိန်မှာတော့ နှစ်ဦးသားတကယ့်ကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ Relationship တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ပုံပါပဲ။
အနုပညာလောကပိုင်းမှာလည်း Lee Sun Bin ဟာခေသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာအရံဇာတ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ဖူးပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ 2017 ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Missing9ဇာတ်လမ်းတွဲဖြင့် ” Best New Actress” ဆိုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
2018 ခုနှစ်မှာတော့ JTBC မှထုတ်လွှင့်မယ့် Sketch ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Rain နှင့်အတူ တွဲဖက်ပြီးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Apan Star ဆုပေးပွဲမှာလည်း ထိုဇာတ်ကားနှင့်ပဲ Best New Actress ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအပြင် Music Video တွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ikon ရဲ့ Apology သီချင်းမှာလည်း ပါဝင်အားဖြည့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုလို အချင်းရော၊အဆင်းပါ ပြည့်စုံတဲ့ Lee Sun Bin ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Lee Kwang Soo တို့ကတော့ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ အဲ့လိုပဲ Lee Kwang Soo လို စိတ်ထားကောင်းမွန်ပြီး၊manner လည်းကောင်းတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရဲ့အတွက် Lee Sun Bin လည်းအတော်လေး ကံကောင်းတဲ့အမျုျိးသမီးလို့ ဆိုရပါမယ်။
အားလုံးလည်း Lee Sun Bin ရဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကို သိလိုက်ရလို့ ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးမှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Next ရေဘေးအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယား အနုပညာရှင်များ »
Previous « BREAKING NEWS: ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ 2AM အဖွဲ့ Seulong
EXO member Xiumin တစ်ယောက် တစ်ခြား Agency တွေထက် SM entertainment ကို ဘာကြောင့် join ဖြစ်သွားလည်းဆိုတော့
ကိုယ့်ရည်းစားက ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာမရှိတော့ရင် Tao အကြံပေးတဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်းသာ တုန့်ပြန်လိုက်ပါ..
GMM TV မှ အရပ် 183+ cm မြင့်တဲ့ ထိုင်းမင်းသားငယ်ငယ်ချောချော (၁၀) ဦး
ဇာတ်လမ်းသစ်တွေထဲက သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ချီးမွမ်းခံနေရတဲ့ Thai TV3 မင်းသမီးများ…